DEG-DEG: Kevin de Bruyne Oo Go'aamiyey Mustaqbalkiisa Manchester City & Heshiiska Cusub Ee Uu Saxeexay | Laacibnet.net
HomeSuuqa Kala IibsigaDEG-DEG: Kevin de Bruyne Oo Go’aamiyey Mustaqbalkiisa Manchester City & Heshiiska Cusub Ee Uu Saxeexay
DEG-DEG: Kevin de Bruyne Oo Go’aamiyey Mustaqbalkiisa Manchester City & Heshiiska Cusub Ee Uu Saxeexay
Xiddiga reer Belgium ee Kevin de Bruyne ayaa soo afjaray hadal-hayntii ka taagnayd mustaqbalkiisa Manchester City, waxaanu qalinka ku duugay heshiis waqti dheer uu kusii joogayo Etihad Stadium.
De Bruyne ayaa saaka qalinka ku duugay heshiis cusub oo afar sannadood ah oo uu u saxeexay Manchester City, kaas oo kusii hayn doona kooxdan illaa laga gaadhayo sannadka 2025.
Laacibkan sannadkii hore ku guuelystay xiddiga ugu fiican horyaalka Premier League ayaa heshiiskan cusub waxa uu u damaanad qaadayaa in uu sii joogo City illaa inta ay da’diisu ka noqonayso 34 jir.
Heshiiskii hore uu De Bruyne ugula jiray Manchester City ayay ka hadhsanaayeen laba sannadood, waxaana soo baxayay warar sheegayay in uu ka fikirayo in uu iskaga tago, hase yeeshee Pep Guardiola ayaa ku qanciyey in uu qalinka u qaato heshiiska cusub.
Kaddib markii uu heshiiska saxeexay, Kevin de Bruyne ayaa la hadlay warbaahinta, waxaanu yidhi: “Ma jirto waqti aan ka farxad badanahay, tan iyo markii aan kusoo biiray City sannadkii 2015, waxa aan dareemay in ay tahay gurigaygii. Waan jecelahay taageereyaasha, qoyskayguna way ku degeen Manchester, ciyaartayduna si fiican ayay ugu horumartay halkan.
“Kooxdani waxay ku socotaa guulo. Waxay isiisay wax kasta oo aan u baahnaa si aan figta u sarraysa u gaadhsiiyo bandhiggayga, sidaa darteed, heshiiskani waa go’aan hore u socod ah. Waxa aan ciyaarayaa kubaddaydii ugu fiicnayd intii aan xirfadda ku jiray, waxaanan dareemayaa in halkani tahay hoygaygii.
“Pep iyo anigu isku si’ ayaanu u aragnaa kubadda cagta. Xidhiidhkaa aan la leeyahay tababarahaayaa aad muhiim iigu ah, sababtoo ah, isku ujeeddo ayaanu nahay, isku waxna waanu doonaynaa.”
August 2015 ayuu Kevin de Bruyne kusoo biiray Manchester City iyadoo £55 milyan oo Gini ay kaga soo iibsadeen kooxda reer Germany ee Wolfsburg, waxaanu markiiba noqday xiddigga kooxda, iyadoo uu caddeeyey in Chelsea ay ku qaldan tay in ay iska iibiso.
Intii uu joogay City, waxa uu 29 jirkani u saftay 176 ciyaarood oo Premier League ah, waxaanu caawiyey 77 gool.